कोरोना संक्रमितलाई कहाँ राख्ने वाणगंगा अन्यौलमा, प्रवक्ता भन्छनः निर्णय गर्दैछौं « Mayadevi Online News Portal
कोरोना संक्रमितलाई कहाँ राख्ने वाणगंगा अन्यौलमा, प्रवक्ता भन्छनः निर्णय गर्दैछौं
प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०७७ शुक्रबार १७:४३
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकालाई कहाँ राख्ने अझै टुंगो लागेको छैन । नगरका ५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । जसमध्ये तीन जना नगरपालिकाले बनाएको क्वारेनटाइनमा रहेका छन भने दुई जना घरमै रहेका छन् ।
शुक्रबार विहान संक्रमण पुष्टि भएका ५ जनालाई पनि व्यवस्थापन गर्न वाणगंगालाई आपत आइलागेको छ । नगरभित्रका दर्जनौं गगनचुम्नी सरकारी विद्यालयका भवन रहेका छन भने उत्तिकै मात्रामा नीजि विद्यालयका भवन छन् । नगरका ११ वडामध्ये ८ वडामा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य चौकी रहेका छन भने पिपरा अस्पताल सिंगै वाणगंगामा छ । तर, अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित राख्ने आइसोलेशन कक्ष बनाउन वाणगंगाले सकेको छैन् ।
एक हप्ता अगाडी नै नगरभित्रकी एक ६ बर्षीय बालिकालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरमा कोरोनाले घण्टी बजाइसकेको थियो । नगरका क्वारेनटाइनमा भारत हुँदै आउने थपि रहँदा कोरोनाको खतराका संकेत प्रष्ट देखिएकै थियो । तर, वाणगंगाले संक्रमित भेटिएपछि राख्ने आइसोलेशन सेन्टर बनाउन तर्फ ध्यान दिएन । आज आएर यो कुरा प्रष्ट भएको छ ।
विहान कोरोना संक्रमित भेटिए लगत्तै वाणगंगामा कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठक कोरोना संक्रमितलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । लगत्तै वाणगंगाले पिपरामा रहेको जनता माविलाई आइसोलेशन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको सूचना बाहिर चुहियो ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि जनता माविमा आइसोलेशन बन्यो भन्ने पोष्टहरु देखिएका थिए । तर, नगरपालिकाका प्रवक्ता विष्णु पौडेलले जनतामा माविलाई आइसोलेशनको सम्भावित स्थान राखिएपनि अझै निर्णय भै नसकेको बताउनुभयो । ‘जनता माविमा आइसोलेशन बनाउन सकिन्छ पनि सकिदैँन पनि ? प्रवक्ता पौडेलले मायादेवीसंग भन्नुभयो, ‘आवश्यक निर्णय लिएपछि मात्र प्रष्ट हुन्छ । कहाँ बनाउने भन्ने ।’
जनता माविमा भवन प्रयाप्त रहेपनि शौचालयको अभावका कारण त्यहाँ सम्भव नहुने आवाज उठेको छ । कोरोना संक्रमितले दैनिक सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा शौचालय प्रयाप्त भएन भने समस्या हुने देखेपछि जनता माविमा आइसोलेशन नहुने पक्कापक्की जस्तै भएको एक जना जनप्रतिनिधिले मायादेवीलाई भने ।
नगरपालिकाले अब सिद्धार्थ क्याम्पसभित्रै आइसोलेशन बनाउने गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । यो क्याम्पसमा नगरपालिकाको क्वारेनटाइन छ । तर, क्वारेनटाइनमा रहेकालाई अन्यत्र कतै व्यवस्थापन गरेर यही आइसोलेशन बनाउन सकिने गरी छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यहाँ नभएर वाणगंगा मावि लगायतका स्थानको बारेमा पनि छलफल चलिरहेको बताइएको छ ।
यता नगरपालिकाको वडा नं. ४ ठाकुरपुरमा देखिएका ८ बर्षीया संक्रमित बालिका घरमै रहेको पाइएको छ । कहाँ जाने कुनै स्थानको पत्ता लाग्न नसक्दा उनलाई घरमै कोठाभित्र राखिएको छ । उनको घर भने अहिले सिल गरिएको छ । संक्रमित मध्येका अर्का एक जना सञ्चारकर्मी पनि हाल घरमै रहेका छन् ।
कपिलवस्तुका क्वारेनटाइनमा बस्ने घट्दै, १० स्थानीय तहमा ३ हजार नजिक
मायादेवी अनलाइन, चार नम्बर । कपिलवस्तुमा क्वारेनटाइनमा बस्नेको संख्या क्रमश
कपिलवस्तुमा ३ हजार बढीको स्वाब संकलन बाँकी, १ हजार चार…
मायादेवी अनलाइन, चार नम्बर । कपिलवस्तुमा अझै ३ हजार भन्दा
कपिलवस्तुका सीमामा सेना परिचालन, भारतबाट आएकाहरु सिधै होल्डिंग क्याम्पमा
मायादेवी अनलाइन, चार नम्बर । नेपालमै कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा
कपिलवस्तुमा चार सय नाघे कोरोना संक्रमित, बुद्धभूमिमा थप ७ जना…
मायादेवी अनलाइन, चार नम्बर । गत बैशाख २५ गतेदेखि कपिलवस्तुमा